श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट, को हो प्रधानमन्त्री ? « Lokpath
२०७५, ११ कार्तिक आईतवार ११:१५
प्रकाशित मिति : २०७५, ११ कार्तिक आईतवार ११:१५
सभामुख कारु जयसुरियाले विक्रमासिङ्घे नै वैधानिक प्रधानमन्त्री भएको र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
अर्को व्यक्तिले संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुष्टी नगर्दासम्म विक्रमासिङ्घेले नै प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु पर्ने उनले बताएका छन् ।
त्यसैगरी अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले पनि संसदमा आफ्नो बहुमत रहेको बताउँदै आएका छन् ।
आफ्नो बहुमत देखाउन अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरिरहेका बेला राष्ट्रपति सिरिसेनाले भने शनिबार संसद्को बैठक स्थगित गरिदिएका छन् ।
संसदमा आफूमाथि हुन सक्ने चुनौती पन्छाउन उनले संसद अधिवेशन आगामी नोभेम्बर १६ सम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाको सत्तारुढ दलले नै मौजुदा गठबन्धन सरकार छोड्ने निर्णय गरेपछि उहाँले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेका हुन् । सिरिसेनाको पार्टी र निवर्तमान प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघको पार्टीले सत्ता गठबन्धन गरेका थिए ।
आफ्नै पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफ्नै प्रतिस्पर्धी राजापाक्षेलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै सपथसमेत गराएका छन् ।
काठमाडौं । इन्डोनेसियामा गत शुक्रवार गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या
बाइडेनको शपथ ग्रहणमा हिंसाको आशंका, फेसबुकले हतियारको विज्ञापनमा रोक लगायो
काठमाडौं । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन २० जनवरीमा शपथ ग्रहण गर्दैछन् ।
पाकिस्तानमा कोभिशिल्डलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति
काठमाडौं । पाकिस्तानले अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको कोभिड १९ भ्याक्सिन कोभिशिल्डलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए १५ हजार बढी कोरोना संक्रमित, कति पुगे मृतक ?
काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या आइतवारसम्म एक करोड पाँच लाख ५७
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा : संविधान सभामा भएका सहमतीको रेकर्ड…
कोशी टप्पु आरक्षण वरपर जङ्गली जनावरको त्रास, चार वर्षमा ५२…